Teratanin' i Amerika - Wikipedia
Teratanin' i Amerika
(tonga teto avy amin'ny Teratanin'i Amerika)
Ny teratanin' i Amerika (amin' ny teny anglisy Native Americans) dia olona nipetraka teo amerika teo aloha ny eoropeanina. Amin' ny fiteny anglisy, Native Americans ny anarana omena azy matetika. Araka any fomba vaovao fahatongavan' ny teratan' i Amerika tany Amerika, avy any Eorazia ny teratan' i Amerika ary tonga tany amerika tamin' i Beringia taloha (mbola tsy nisy rano teo amin' ny andilan' i Bering tamin' izany fotoana izany). 12 000 taona lasa ny fifindra-monina farany. Ny Paleô-indianina ireo dia niparitaka manerana an' i Amerika, niova ary nihabetsaka ny kolontsaina sy ny fiteny noho ny fiparitahany. Ny teny hoe Indianina dia avy amin' i Christophe Colomb, nihevitra hoe tonga tany Azia (India Atsinanana) izy nefa tany Amerika izy no nitotona, noho izany dia Indianina ny anarana nomeny ny teratany satria tamin' izany fotoana izany, mbola tsy fantatra ny fisian' ny kontinenta amerikana (izy irery ny anisan' ny voalohany niampita ny Ranomasimbe Atlantika tamin' izany fotoana izany).
Betsaka ny foko indianina mihaza sy mioty, misy maromaro ihany koa mamboly. Misy fiaraha-monina miaina amin' ny fambolena ary misy sasany hafa mamboly, mihaza ary mioty. Misy faritra any Amerika mbola ipetrahan' ny terataniny; any Meksika sy any Bôlivia izao no tena betsaka teratany indrindra any Amerika raha miresaka ara-kevitra (proportion). Ary misy fiteny teratany maro mbola be mpiteny, toy ny fiteny nahoatla, ny fiteny maia sy ny fiteny goarany. Olona amana tapitrisa no miteny ireo fiteny ireo. Misy koa teratany mbola tsy fantatra ary mbola tsy ary nahita Eorôpeanina. Misy izao ohatra teratany any Brezily (Amazonia) mbola tsy hita mihintsy.
2.1 Vondrom-piteny amerindianina
2.1.1 Vondrom-piteny aljika
2.1.1.1 Vondrom-piteny algônkiana
2.1.2 Vondrom-piteny sioanina-kataobanina
2.2 Amerika Afovoany
2.4 Amerika Atsimo
2.5 Atsimo ny Amerika Atsimo
2.6 Jereo koa
Foko teratanin'i Amerika arktika
Foko teratanin'ny tany lemaka
Foko teratanin'i Amerika sobarktika
Foko teratanin'ny faritany atsimo andrefana
Foko teratanin'ny faritany atsimo atsinanana
Foko teratanin'ny morontsiraka avaratra andrefana
Foko teratanin'ny kamory
Foko teratanin'i Kalifornia
Foko teratanin'ny tany lemaka an-tendrombohitra
I Amerika dia voazarazara ho faritany 9 araka izay voalaza teo ambony. Ny faritany iray dia manana toe-tany maha-izy azy ka miova arakaraka izany ny fomba fiainan' ny mponina teratany
Ny fiteny wiyot, miami, illinois, etchemin, loup A, loup B, mahican, massachusett, mohegan, pequot, nanticoke, narragansett, pamlico, powhatan, kiripì, naugatuck, unami, unquachog sy shinnecock dia lazaina fa maty avokoa; ny mpiteny wiyot farany (Della Prince) dia matin' ny fahanterana taminy taona 1962. Ny teny sasany rehetra dia atahorana ho faty ihany koa. 12 sisa ny mpiteny yurok.
Azontsika sokajiana ho anaty vondrona roa lehibe ny fiteny algonkianina:
ny fiteny algonkianin' ny tany lemaka;
ary ny fiteny algonkianin' ny ala lehibe sobarktika.
Amin' ny vondrom-piteny sioanina-kataobanina dia ahitana fiteny fito ambin' ny folo
I. Mosokôgeana tandrefana
II. Mosokôgeana tatsinanana
A. Mosokôgeana tafovoany
i. Renivondrona apalatsia-alabama-koasaty
Ny vondrom-piteny atabaskanina dia anisan' ny vondrom-piteny mivelatra indrindra ao Amerika avaratra. Izy io dia hita amin' ny faritany sobarktika .(avaratr' i Kanada, Alaska), amin' ny faritra atsimon' i Etazonia ankehitriny (Texas, New Mexico) ary ao Meksika. Ny teny atabaskanina ihany koa amin' izao fotoana izao no vondrom-piteny teratany be mpiteny indrindra ao Amerika Avaratra sy Afovoany.
Lahatsoratra antsipirihany : Irôkoà.
Lahatsoratra antsipirihany : Fiteny irôkoà.
Ny teny dia avy amin' ny teny frantsay Iroquois. Tsy dia mazava loatra ny fiavian' ny teny hoe "Iroquois". Misy milaza hoe avy amin' ny filazana hiro kone ("voalazako") ilay teny; na avy amin' ny teny algonkianina Irinakhoi (bibilava misioka). Manonona ny tenany ho Haudenosaunee ny foko irôkoà.
Lahatsoratra antsipirihany : Teratan'ny Amerika Afovoany.
Lahatsoratra antsipirihany : Teratanin'ny Karaiba.
Atsimo ny Amerika AtsimoHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Teratanin%27_i_Amerika&oldid=1038574"
Dernière modification le 7 Oktobra 2021, à 12:41
Voaova farany tamin'ny 7 Oktobra 2021 amin'ny 12:41 ity pejy ity.